Pixel Dialer for Non root Phones | XPERIAN MYANMAR
Applications, Mods, Third-party Apps, Tutorials
Posted by Kyaw Zaww on 07/11/2016
(ROOT) How to enable 4K video recording on Xperia X, X Compact & X Performance
Android Marshmallow တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ Google Pixel Dialer app လေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Dialer app အရင်ကလည်းသွင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် root ရှိလိုပါတယ်။ အခုတော့ Non root တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ app တွေ့လိုပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
DO AT YOU OWN RISK, XPERIAN MYANMAR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANYTHING THAT MIGHT HAPPEN ON YOUR PHONE.
Dialer, contact အပြင် Incoming call screen, outgoing call screen တွေပါ Google Pixel ရဲ့အတိုင်းသုံးလို့ရမှာပါ။ Call blocking လဲပါပါတယ်။
Mod လုပ်ထားတဲ့ app မလို့ Bug တွေရှိပါတယ်။
Google ရဲ့ Caller ID reverse lookup အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ တစ်ခါတလေ setting ထဲဝင်ရင် Freezs ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
တခါတလေ on-screen button အတွက်ထားတဲ့ padding ကပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ (ရုပ်ဆိုးရုံပါပဲ)
အရင်ဆုံး Download link ကနေ Google Dialer ကိုဒေါင်းပြီး ပုံမှန်အတိုင်း Install လုပ်ပါ။
Setting >app,ထဲသွားပါ-ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက setting icon ကိုနှိပ်ပါ။
Default app ထဲကိုဝင်ပြီး Phone နေရာမှာ ခုနကသွင်းထားတဲ့ Dialer app ကို default ပေးလိုက်ရင်သုံးလို့ပါပြီ
All Credit goes to @Kolda_CZ from XDA
30,741 total views, 71 views today
0 Give meaHeart, If you like that post!
Google DialermarshmallownonrootXperia XXperia X PerformanceXperia X seriesXperia XZXperia Z2Xperia Z3